Wararka Maanta: Sabti, Aug 4 , 2012-Howlgallo ay sameeyeen ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM oo lagu soo qabqabtay askar kuwo kalena lagu dilay
Saraakiil u hadlay ciidamada dowladda KMG ah ayaa sheegay in howagllada oo ahaa kuwo qorsheysan ay kusoo qabqabteen in ka badan 40-askari oo dhac geysanayay ayna sidoo kale ku dileen askar kale oo dhac geysanayay.
"Howgalladu waxay ahaayeen kuwo xaqiijinayay ammaanka waddada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxaana lagu dilay dhowr askari oo diiday inay hubka dhigaan, in ka badan afartan askari oo kalena waa la qabtay," ayuu yiri sarkaal u hadlay hay'adaha ammaanka ee dowladda KMG ah.
Inkastoo aan la ogeyn askarta lagu dilay howgalka tiradooda, ayaa haddana waxay howgalladan noqonayaa kuwii ugu horreeyay noocooda oo ay ciidamada DKMG iyo kuwa AMISOM ka sameeyaan waddada isku xira Muqdisho iyo Afgooye.
Howgalladan ayaa waxay imaanayaa iyadoo gaadiidleyda iyo shacabka ku safra jidakaas ay ka cabanayeen xilliyadii ugu dambeeyay cidammo ka tirsan kuwa DKMG ah oo dhac u geysanaya, iyadoo saraakiishu ay howgalkan ku sheegeen mid ay uga jawaabayeen cabashadaas.
Madaxweynaha dowladda KMG ah ee Soomaaliya, Sheekh Shariif ayaa dhawaan ku bixiyay amar buuxa in lala dagaalamo askarta dhibaatooyinka ka wada degmada Afgooye iyo jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye, balse lama oga in howgalladan ay daba socdaan hadalkaas iyo in kale.